XFS oo gargaarkii ugu horeysay u geysay dadka uu saameeyey fatahaada Webiga Shabelle – Mareeg.com somalia, World News and Opinion. XFS oo gargaarkii ugu horeysay u geysay dadka uu saameeyey fatahaada Webiga Shabelle * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda gargaarka XFS ayaa markii ugu horeysay la gaarsiiyey deeq raashiin dadkii uu saameynta xooggan ku yeeshay fatahaada webiga xili qooysas badan ay ka barakaceen fatahaada.
Wasiirka wasaaradda gargaarka Hirshabelle Cabdi Mahad Qoor-gaab oo lawareegay deeqdan raashinka ah ayaa sheegay in baaqyo horay ay ugu jeediyeen DFS ay kaga soo jawaabtay islamarkaana duulimaadyo kale ay rajeynayaan kuwaaso maalmaha soo socda gaari doona magaalada Jowhar.
Dadkii ku barakacay fatahaada wabiga Shabelle ayaa wali helin gar gaar rasmi marka laga reebo midkan hada ay geeysay dowladda.